5 युरोपमा सबैभन्दा अविस्मरणीय प्रकृति भण्डार | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड >5युरोपमा सबैभन्दा अविस्मरणीय प्रकृति भण्डार
ब्रीथटकि mountain पहाड चुचुरो, फूलेको उपत्यका, झरनाहरु, पोखरी, र विविध वन्य जीवन, युरोपको संसारको सबैभन्दा अविस्मरणीय प्रकृति भण्डारको घर. वसन्त inतुमा खिलिएको विशाल हरियो भूमिहरूमा खर्च गर्दै,5युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर प्रकृति भण्डारहरू राष्ट्रिय निकुञ्जहरू सुरक्षित छन् जुन विश्वभरिबाट यात्रीहरूलाई स्वागत गर्दछ. यदि तपाईं पैदल यात्राको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ भने, ट्रेकिंग, वा प्रकृति अभयारण्यको मजा लिदै, त्यसोभए तपाईं हाम्रो प्रेम गर्नुहुनेछ5यूरोपमा शीर्ष अविस्मरणीय प्रकृति भण्डार.
1. इटलीमा बेलुनो डोलोमाइट नेचर रिजर्व
Belluno प्रकृति आरक्षित मा स्थापित भएको थियो 1990 डोलोमाइट्स को सुन्दर वन्य प्रकृति को रक्षा गर्न. मा डोलोमाइट को बाहिरी भाग मा स्थित छ उत्तरी इटाली, बेलुनो प्रकृति पार्क वसन्त inतुमा रोमाञ्चक हुन्छ. को हरियो पहाड र दर्शनीय पहाड चुचुराहरू फूलको कालीनमा ढाकिएका छन्. तपाईंको फिटनेस स्तर जस्तोसुकै, यो प्रकृति रिजर्वको अन्वेषण गर्न तपाईंसँग एक ठूलो समय हुनेछ, त्यहाँ धेरै ट्रेल्स छन्. युरोपमा बेलुनो प्रकृति रिजर्व शुरुआती र अनुभवी पैदलयात्रा दुबैको लागि उत्तम छ.
32000 दुर्लभ वनस्पति र चूनढुण चुचुराहरूको हेक्टर, बेलुनोको प्राकृतिक रिजर्व Cismon उपत्यका देखि Piave उपत्यका सम्म फैलिएको छ. समृद्ध विविधता दुवै जीव र संस्कृतिमा हुन्, पियेव उपत्यकाको क्षेत्रका धेरै गाउँहरूका लागि धन्यवाद. यसैले जब तपाईं युरोपमा बेलुनो प्रकृति आरक्षित भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईं प्राकृतिक चमत्कार र सांस्कृतिक रत्नहरूको एक महान खोजी यात्रा गर्न को लागी मौका पाउनुहुन्छ.
बेलुनो नेचर रिजर्वमा कसरी पुग्ने?
Belluno प्रकृति आरक्षित भन्दा कम छ3भेनिसबाट घण्टा रेल यात्रा.
जहाँ म बेलुनो पार्क वरिपरि बस्न सक्छु?
त्यहाँ धेरै हिमाली झोपडाहरू छन्, बी&बी, र होटलहरू.
म बेलुनो प्रकृति आरक्षित मा कति दिन खर्च गर्नु पर्छ?
बेलुनो डोलोमाइट्स आरक्षित सबैभन्दा ठूलो हो र5युरोपमा सबैभन्दा अविस्मरणीय प्रकृति भण्डार. पनि, बेलुनो एक सुन्दर प्राकृतिक पार्क हो, त्यसैले तपाइँ कम्तिमा खर्च गर्नुपर्छ3दिन अन्वेषण र लग इनहरूको मजा लिदै, पहाड, र प्राकृतिक महिमा.
2. अष्ट्रिया मा Hohe Tauern प्रकृति रिजर्व
युरोपेली आल्प्समा सबैभन्दा ठूलो प्रकृति आरक्षित अस्ट्रियामा अवस्थित छ. Hohe Tauern रिजर्व को घर छ 10,000 पशु प्रजाति, 1,800 बिरुवाहरु, र ग्रोसग्लग्नर, अस्ट्रियाको उच्च शिखर, मा 4,798 समुद्र स्तर माथि मीटर. यो उत्कृष्ट शिखर बीचमा बास गर्दछ 200 अन्य चुचुराहरू, हरियो जीव, पहाड पोखरी, र झरनाहरू.
Hohe Tauern प्रकृति रिजर्व उपत्यका शानदार हिमनदी भरिएका छन्, पुरानो र रमणीय गाउँ दृश्य, फूलको कालीन, र वनहरू. यो यूरोपीय प्रकृति पार्क वरपरका क्षेत्रहरुमा यसको आगन्तुकहरु र भाग्यशाली बासिन्दाहरुको लागि अभयारण्य हो. विशेषत, Umbalfalle प्रकृति झरना र नदीहरु को ट्रेल, जहाँ तपाईं केही देख्नुहुनेछ सबै भन्दा अचम्मको झरनाहरु यूरोपमा.
कसरी Hohe Tauern प्रकृति रिजर्व गर्न?
Hohe Tauern प्रकृति आरक्षित मल्लनित्ज शहर को धेरै निकट छ. भियना होहे टाउर्नबाट रेलमा5घण्टा.
जहाँ म Hohe Tauern पार्क वरिपरि रहन सक्छु?
मल्लनित्ज होशे टाउर्नको प्रसिद्ध शहर हो जहाँ धेरै आवास विकल्पहरू छन्.
कति दिनहरू म Hohe Tauern मा खर्च गर्नु पर्छ?
त्यहाँ धेरै विविध छन् Hohe Tauern मा पैदल यात्रा ट्रेल्स प्रकृति रिजर्व, त्यसो त योजना बनाउने 4-5 दिन यात्रा उत्तम छ. यस तरिकाले तपाईं पार्क र शहरहरू नजिक पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ.
3. फ्रान्स मा Ecrins प्रकृति रिजर्व
तपाईंले फ्रेंच आल्प्समा यस अद्भुत प्रकृति रिजर्भको माध्यमबाट यात्रा गर्दा, चीललाई अवलोकन गर्न नबिर्सनुहोस्, स्टोट्स, विलो ग्रस, र धेरै अन्य जंगली जनावरहरू त्यो घर कल. यूरोपियन आल्प्समा यो आश्चर्यजनक रिजर्भ सुन्दर मध्ये एक हो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तपाईंसँग खोजी गर्ने मौका हुनेछ.
हिमनदी, अग्लो हिमालहरू, अल्पाइन हरियो भूमि, र ताजा हावा, एक्रिन्सको दृश्य र परिदृश्यले तपाईंको आत्मालाई कब्जा गर्नेछ.
इक्रिनस प्रकृति रिजर्भमा कसरी पुग्ने?
तपाईं फ्रान्स मा कुनै पनि बाट Ecrins राष्ट्रीय पार्क पुग्न सक्नुहुन्छ. प्रकृति आरक्षित इटालीको साथ फ्रान्सेली सीमा नजिक अवस्थित छ. यो लियोनको नजिक छ, Marseilles, र स्विट्जरल्याण्ड मा जेनेभा, त्यसैले फ्रान्सको इक्रिनसम्म रेल यात्रा एक उत्तम विकल्प हो.
जहाँ म ईक्रिन पार्कको वरिपरि बस्न सक्छु?
परिवार-मैत्री होटलहरु देखि छुट्टी भाडा सम्म, त्यहाँ Ecrins प्रकृति आरक्षित वरपर आवास विकल्प को एक विविधता छ.
ईक्रिनमा मैले कति दिन खर्च गर्नुपर्दछ?
यो तिमीमा भर पर्छ. तपाईं को लागी समर्पण गर्ने निर्णय गर्नुहोस्7दिन वा एक सप्ताहन्त ब्रेक को लागी, तपाईं एक बिल्कुल काल्पनिक यात्रा हुनेछ.
4. स्याक्सन जर्मनी र चेक गणराज्यमा बोहेमियन स्विजरल्याण्ड नेचर रिजर्व
सेक्सन स्विजरल्याण्डको अद्भुत प्रकृति आरक्षित जर्मनीबाट चेक गणतन्त्रसम्म फैलिएको छ. एल्बे चूना पत्थर पहाडहरू र विश्व प्रसिद्ध प्रविकाका ब्रेना चट्टान गठनले यसअघि नै “सिंह, बोक्सी, र वार्डरोब "फिल्म. घाँटीको माथिल्लो भागमा धेरै इन्स्टाग्राम-अनुकूल दृष्टिकोणका साथ यो उत्साहजनक प्रकृति आरक्षण युरोपमा सबैभन्दा अविस्मरणीय प्रकृति भण्डार हो।.
गर्मी या जाडो, हरियो पथ, र ट्रेलहरू घाटी र नदीको दुबै किनारमा हरियो वनस्पतिमा राम्रोसँग र फरक छुट्याउन चिह्नित गरिएको छ. स्याक्सन जर्मनी, वा बोहेमियन स्विजरल्याण्ड, तपाईंको मूल यात्रा वा अन्तिम गन्तव्यमा निर्भर गर्दछ, जुन विश्वभरिबाट यात्रीहरूको लागि अद्भुत ओएसिस र पैदल यात्राको स्वर्ग हो.
स्याक्सन जर्मनी वा बोहेमियन स्विट्जरल्याण्ड प्रकृति राखीहरू कसरी पुग्ने?
तपाईं यस अद्भुत प्रकृति आरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ युरोप दिनको यात्रा द्वारा प्राग वा ड्रेस्डेन बाट.
जहाँ म राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि बस्न सक्छु?
प्रकृति रिजर्व दुवै जर्मनी र चेक गणतन्त्रको सीमामा अवस्थित छ, आवास विकल्प अनन्त छन्.
बोहिमियन स्विजरल्याण्डमा कति दिन खर्च गर्नुपर्दछ?
एक दिन यात्रा निरपेक्ष अनिवार्य छ, र यदि तपाईं केहि दिनहरू खर्च गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसो भए यो सिफारिश गरिएको छ.
5. फ्रान्समा ओर्डेसा र मोन्टे पेरिडिडो नेचर रिजर्व
ठीक स्पेन र फ्रान्स बीच बीचमा स्थित छ, ओर्डेसा र माउन्ट पेरिडो यूरोपका केही आश्चर्यजनक प्रकृति भण्डारहरू हुन्. जहाँ सम्म एक चोटी संग फ्रान्सेली पक्ष मा स्थित छ 3,355 एम. मोन्टे पेरिडिडो पर्वत श्रृंखलाको नामले यसको नाम प्राप्त गर्‍यो किनकि यो सिमानाको फ्रान्सेली पक्षबाट देखिएन.
दर्शक अर्देसा दुबै हो युरोपको युनेस्को विश्व सम्पदा र वन्यजन्तु र जीव जन्तुको एक जीवस्थान आरक्षित. यो अर्डेसा उपत्यकाको घर छ, झरनाहरु, विविध वन्यजन्तु, सुनौलो चील सहित, र 32 स्तनपायी प्राणीहरूको प्रजाति. तपाईले प्यरेनिस पर्वत श्रृंखलाको दृश्य वृद्धि र प्रशंसा गर्दा, Marmots को लागी पक्का गर्न निश्चित गर्नुहोस्, हक्स, र उल्लू, साथै. त्यसैले, अर्डेसा र मोन्टे पेरिडो प्रकृति रिजर्भ कुनै पनि प्रकारका यात्रीहरूका लागि युरोपमा अद्भुत अभयारण्य र गन्तव्य हो.
बाट3घण्टा ’लाई2दिनको ट्र्याकिंग यात्रा, अर्डेसाले विविध पदयात्रा ट्रेल्स प्रदान गर्दछ, फिटनेस को विभिन्न स्तर को लागी.
कसरी अर्डेसा प्रकृति रिजर्वमा पुग्ने?
अर्डेसा र मोन्टे पेरिडो रिजर्भ दुबै फ्रान्स र स्पेनबाट पहुँचयोग्य छ. Zaragosa बाट Torla-Ordesa को बारे मा यो हो5घण्टा वा3बार्सिलोना बाट घण्टा. यदि तपाईं फ्रान्स भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए टुलूस हो7घण्टा टाढा.
म कहाँ अर्डेसा पार्क वरिपरि बस्न सक्छु?
तपाईं Torla मा महान आवास विकल्प पाउन सक्नुहुन्छ, अतिथिगृहहरू र होटलहरूबाट.
मैले अर्डेसा नेचर रिजर्वमा कति दिन खर्च गर्नुपर्दछ?
अर्डेसा र माउन्ट पेरिडोलाई युरोपको योसेमाइट पार्क पनि भनिन्छ. त्यसैले, तपाईं कम्तिमा रहनु पर्छ3दिन, पैदल यात्रा र विश्राम समय सहित.
5 युरोपमा सबैभन्दा अविस्मरणीय प्रकृति भण्डारको महाकाव्य दृश्य र पैदल यात्रा ट्रेलहरु को दुनिया को आश्चर्यजनक झरनाहरु को प्रस्ताव. त्यसैले, हरियो उपत्यका भरमा पैदल यात्रा, फूलका खेत र पहाडका चुचुराहरूको प्रशंसा गर्नु तपाईं आफैंलाई दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपहार हो. युरोपको सबैभन्दा अचम्मका देशहरूमा जंगली प्रकृति भन्दा बढी आरामदायक र प्रेरणादायक अरू केही छैन.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी ट्रेन द्वारा तपाईंको छनौटको प्रकृति भण्डारमा छुट्टीको योजना बनाउन सहयोग गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा Most सर्वाधिक अविस्मरणीय प्रकृति भण्डार" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funforgettable-nature-reserves-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, र तपाईं / ja गर्न / fr वा / डे र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
अस्ट्रियानाटेरिजभ डोलोमाइट्सली प्रकृति संरक्षण प्रकृतिविकासकर्ता प्रकृतिविकास प्रकृतिरेवसेरोप travelgermany